Wasiirka Beeraha iyo Masuuliyiin Ka Socday Baanka KFW Ee Jarmalka Oo Kormeeray Bilawga Mashruuca Biji | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wasiirka Beeraha iyo Masuuliyiin Ka Socday Baanka KFW Ee Jarmalka Oo Kormeeray Bilawga Mashruuca Biji
Hargaysa (SDWO): Wasiirka wasaaradda beeraha Somaliland iyo masuuliyiin ka socday hay’adda KFW oo laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa maanta kor meer indho indhayn ah ku soo maray mashruuc ciidd iyo biyaha lagu xidhayo oo ka socda degaanka Biji ee gobolka Gabiley.
Wefti uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda Horumarinta Beeraha Somaliland Axmed Muumin Seed waxaa ku weheliyay agaasimaha guud ee wasaaradaasi Maxamed Cilmi Aadan (Ilkacase), xubno ka socday agaasime waaxeedya wasaaradda.
Sidoo kale waxaa wasiirka wehelinayay masuuliyiin ka socday Baanka horumarinta Jarmalka ee KFW iyo guddoomiye ku xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdilaahi (Cali Case), waxaanay soo kormeereen bilawga Mashruuca ciidda iyo biyo qabatinka ee Biji.
Mashruucan oo uu maalgalinayo baanka Horumarinta Jarmalka ee KFW waxa uu ka bilaabmay degaano ka mid ah gobolka Gabiley gaar ahaana meesha loo yaqaano Biji.
Degaanka Geed Abeera oo mashruucan ka bilaabmay ayaa masuuliyiinta soo kormeereen, iyadoo ay halkaasi ka jeediyeen Khudbado la xidhiidha ujeedada iyo waxa mustaqbalka laga rajaynayo mashruucan.
Wasiirka oo hadal ka jeediyey goobtaasi waxa uu tilmaamay inay rejaynayaan in wax ka qabashada beerahani ay ka qayb qaadato kobcinta wax soo saarka dalka, isagoo dadka degaanka kula dar daaramay inuu tusaale fiican u noqdo mashruucani.
Waxaanu yidhi “Mashruuca maanta halkan ka bilaabmayaa waa mashrucii ay inaga caawisay dawladda Jarmalku oo ay maanta weftigan ka socda Bangiga horumarinta Jarmalka ee KFW inagala socdaan oo bilawgiisii maanta inoo bilaamyo oo ka wasaarad ahaan anaga iyo agaasimihii aanu u wada dhanahay iyo maamulkii gobolkuba oo aanu doonayno inuu maanta furmo”.
Axmed Muumin Seed, ayaa sidoo kale waxa uu sharaxaad ka bixiyay qaybaha uu mashruucaasi ka kooban yahay iyo degaamadda laga fulinayo. Waxaanu yidhi “Mashruucaasi waxa uu ka kooban yahay dhawr qaybood oo ay kow ka yahay in biyaha la joojiyo, waxa ku xiga in la xidho gabyanka, waxa la qodi doonaa dhaamam oo dhibaatooyinka maanta dalkeena haystaa waa laba arimood waa biyihii oo socda oo badda inaga galaya iyo nabaad guur xaga ciida inagaga socda.
Markaa labada inoogu daran waa labadaasi, markaa ka wasaarad ahaan labadaasi ayaanu awood badan saarnay oo halkan aynu hadda joognaa waa Geed-abeera oo waa halka uu ka bilaabmayo mashruucu oo dusha sare halkaa aynu taaganahay oo deegaanada mashruucan ka fulayo waa Lafta-boqor, Taysa iyo Geed-abeera, intaasi ayuu mashruucu ka fulayaa.
Waana inta aanu rabno in dadkeena deegaanku ay ka faa’iidaystaan, waxaananu ugu talo galnay in uu tacabkaasi dhulkeena galo si wax soo saarkeenu uu horumar u gaadho”.
Geesta kale wasiirka ayaa uga mahad celiyay dawladda Jarmalka gaar ahaana baanka KFW oo mashruucaasi fulinaya, isagoo xusay in haddii mashruucaasi uu guulaysto la kordhin doono, isla markaana ay ka wasaarad ahaan kor meer joogto ah ku samayn doonaan sidii mashruucaasi u hirgeli lahaa.
“Waxa aanu dawladda Jarmalka uga mahadcelinaynaa in ay maanta halkaasi soo gaadheen oo ay goob joog u yihin shaqadii oo bilaabmaysa iyo inaga oo goobtii joog-na, oo aynu ka wasaarad ahaan u dhanahay, mashruucana haddii aynu ku guulaysano waa la inoo kordhin doonaa anagu-na (wasaaradda) waanu ka war hayn doonaa siday hawluhu u socdaan” ayuu yidhi wasiirka beeraha Somaliland.
Dhinaca kale badhasaab ku xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdilaahi (Cali Case) oo isna madaashaasi ka hadlay waxa uu soo dhaweeyey mashruucaasi oo ku tilmaamay inuu ka qayb qaadanayo kobcinta wax soo saarka dalka.
Mrs Katrina oo ah maamulaha mashruucan uu maalgalinayo Baanka Horumarinta Jarmalka ee KFW, kana socotay Baankaasi ayaa sheegtay inay u mahadnaqayaan wasaaradda beeraha, isla markaana ku faraxsan tahay inay aragto shaqadii oo bilaabantay.